यो तपाइँले कहिले पनि एक प्रयोगकर्ता इन्टरफेस बनाउन हुँदैन क्रिएटिव अनलाइन
त्यहाँ छन् दर्जनौं पृष्ठहरू जुन हामीलाई उत्तम ईन्टरफेस कसरी सिर्जना गर्ने भनेर देखाउँदछ प्रयोगकर्ता, तर के सबैभन्दा खराब बारे? यो त्यस्तो होइन कि हामी यसको आधारहरू सिकाउन चाहान्छौं, तर अधिक प्रामाणिक दृष्टिकोणबाट, कसरी प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस नबनाउने भनेर सिकाउने चाखलाग्दो हुन सक्छ।
यो उसले गरेको छ बगार भनिने एक डिजिटल एजेन्सी र यो विचारको लागि धन्यवाद धेरैको ध्यान खिच्नको लागि व्यवस्थित भएको छ। त्यो हो, कसरी सिकाउनु भएको धन्यवाद कसरी इन्टरफेस कहिले पनि बनाउनु हुँदैन, तिनीहरू आफ्नो वेबसाइटमा धेरै भ्रमणहरू आकर्षित गर्दैछन्।
र त्यो हो न त यसमा प्रवेश गर्नु आवश्यक छ केहि अधिक प्राविधिक आधारभूतहरूको व्याख्या गर्न। हामी बस जान्छौं प्रयोगकर्ता Inyerface र हामी हामी देख्न सक्छौं कि विभिन्न दृश्य तत्वहरू संग खेल शुरू।
लोगो, बर्षको टाइपोग्राफी जब डायनासोर अझै पृथ्वीको अनुहारमा अवस्थित थिए र त्यो FAB एक "होइन" ले काम पनि गर्दैन। यस वेबसाइटलाई अलि छोएर, तपाईले उत्तम तरीकाले जान्न सक्नुहुनेछ कि कसरी तपाईले इन्टरफेस कार्य गर्दैन जुन काम गर्दैन।
केवल त्यस चीजमा काम गर्ने कार्य एजेन्सी पृष्ठको सीधा लिंक हो र हामी तल बायाँमा अवस्थित छौं। यो क्लिक गर्न योग्य छ, र यसले काम गर्दछयो कत्तिको सजिलो छ, हह? र यो त्यो लिंक हो जुन हामीसँग अर्को पृष्ठमा हुन्छ र त्यो रेखांकित गर्दछ कि सामान्यतया यो संकेत गर्दछ कि हामीसँग अर्को लि link्क छ जुन हामी भ्रमण गर्न सक्दछौं त्यसले काम गर्दैन।
una आफैमा उत्कृष्ट विचार र यो डिजिटल एजेन्सीको लागि साहसी प्रस्ताव हामीले पहिले नै भनेझैं यो वेब बकवास संग, यो आगन्तुक आकर्षित गर्न सक्षम छ। तपाईंलाई थाहा छ, हाईपर मेगा यूजर इन्टरफेस गाइड सिर्जना गर्न आवश्यक छैन जनतालाई आकर्षित गर्न। बरु, यसले रचनात्मकताको एक बिट लिन्छ। केहि हामी भित्र देख्न सक्छौं माईक्रोसफ्टको नयाँ विज्ञापन अभियान यसको विन्डोज १.० को साथ.
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » डिजाइन उपकरणहरू » कसरी कहिल्यै एक प्रयोगकर्ता इन्टरफेस बनाउन
खेलौना कहानी in मा विवरण को अविश्वसनीय स्तर